Xasan Shiikh oo tagay magaalada Jowhar si uu uga qaybgalo caleemo-saarka Cosoble - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaXasan Shiikh oo tagay magaalada Jowhar si uu uga qaybgalo caleemo-saarka Cosoble
Xasan Shiikh oo tagay magaalada Jowhar si uu uga qaybgalo caleemo-saarka Cosoble
October 22, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud. [Sawirka: Archive]
Jowhar-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta tagay magaalada Jowhar si uu uga qaybgalo caleemo-saarka madaxweynaha Hir-Shabeelle Cali Cabdulaahi Cosoble oo dhici doonta gelinka dambe ee maanta.
Xasan iyo wefdigiisa ayaa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka Jowhar masuuliyiinta Hir-Shabeelle.
Dhanka kale madax ka socota Soomaaliya iyo dalka dibadiisa ayaa imaanaya magaalada Jowhar si ay uga qaybgalaan caleemo-saarka madaxweynaha Hir-Shabeelle.
Asbuucii lasoo dhaafay, Cosoble ayaa loo doortay madaxweynihii kowaad ee maamul goboleedka hadda la dhisay ee Hir-Shabeelle, dorasho ka dhacday magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
November 11, 2016 Madaxweynaha Puntland oo u safray magaalada Gaalkacyo si uu uga qeybgalo kulan lagu dhammaynayo dagaalka Gaalkacyo
April 29, 2017 Raysulwasaaraha Soomaaliya oo codsaday in lala dagaalamo musuqmaasuqa
Garoowe-(Puntland Mirror) Cabdiweli Maxamed Cali, madaxweynaha xilka haya ee Puntland, ayaa ku dhawaaqay maanta oo Talaado ah in uu mar labaad u tartamayo doorashada madaxweynaha. Mr. Cabdiweli, oo si weyn loogu yaqaan Gaas ayaa ku [...]
Bomb blast kills one child in Galkayo
Galkayo-(Puntland Mirror) At least one child was killed after a bomb they were playing exploded at Salaama IDPs camp in the northern of Galkayo, medical source told Puntland Mirror. More than 10 children wounded in [...]